ကြေးဇူးတငျလိုကျတာ…ဒီနေ့ လြှောကျပွီ မပတျရတော့ဘူး…သားရယျ – Shwe Thadin
15/12/2021 T Z International 0
ကားနဲ့ ဖွတျသှားရငျး…ဖွတျခနဲ တှလေို့ကျရတာ…ကိုယျတှခေ့ငျြလို့ ရှာနတေဲ့ အဖိုး… အဖိုးရေ…လာပါအုံး…ဟေ…လာပွီ ကှ…ဘာယူမလဲ သား… ဂှေးခြို၊ သရကျ၊ မရမျးသီးပါ တယျ ကှ…ဟုတျ အဖိုး…ဘယျလိုရောငျးတုနျး?? တခြောငျး 200 Ks ပဲ သား… ဟုတျ ဘယျနှခြောငျးရှိလဲ အဖိုး ?? အမြားကွီးပဲလေ…သား ဘယျနှခြောငျးယူမလဲ…ဘာယူမလဲ ??
သား အကုနျယူမယျ။ ဟေ…တကယျကွီးလား။ တကယျပေါ့…အဖိုးရဲ့ ဒါဆို သားတှကျကွညျ့ ပေးပါလား…အဖိုး မတှကျနိုငျတော့ဘူး။ ဟုတျ အဖိုး…သားတှကျကွညျ့မယျနျော အေး…အေး…အဖိုးရေ…(၈၁)ခြောငျး ရှိတယျ ဗြ…အေး…(၈၀)ပဲ ထားကှာ…တခြောငျးက ယူမနတေော့ဘူး။ ဟာ…ဒါဆို ကြေးဇူးတငျပွီဗြာ …‌ရော့ အဖိုး 30,000 Ks…ဟေ…သား မငျးပေးတာက ပိုကျဆံ အရှကျတှေ မြားနတေယျနျော…
ပိုနတေယျကှ (5ထောငျတနျတှေ ပေးလိုကျတာမလို့) အဖိုး…ဘယျလောကျ ပွနျအမျးရမှာတုနျး? မအမျးရဘူး အဖိုး…ပိုတာ အဖိုးယူလိုကျတော့ ဗြ…ဟာ…ဒါဆို ခု ပွနျရငျ ဆနျ နဲ့ ဆီ စားစရာတှေ ဝယျပွီ ပွနျမယျကှ…ဟုတျ အဖိုး…အဖိုးကွိုကျတာ လုပျဗြာ…ကြေးဇူးတငျပါတယျကှာ…ဒီနေ့ လြှောကျပတျပွီ မရောငျးရတော့ဘူးပေါ့ ကှာ…အိမျ အစောကွီး ပွနျနားရပွီ…လိုတာတှလေဲ ဝယျလို့ရပွီ…
ကြေးဇူးတငျတယျကှာ…အဖိုး ဇာတာက တသကျလုံး ဒါပဲ ရောငျးစားရတဲ့ ဇာတာပါတယျ ကှာ…ကိုဗဈမှာ အဖိုး အဲ့ဇာတာ ပွီဆုံးမယျ ထငျခဲ့တာ…အသကျက ရှငျနတေော့…ဆကျရောငျးရတာပေါ့ကှာ(အသကျ ၇၈နှဈရှိပွီတဲ့) ဟာ အဖိုးကလဲ…ပေါကျကရတှေ ပွောပွီ…အိမျဂရုစိုကျပွနျတော့နျော…အေး…အေး…အိမျအစောကွီး ပွနျရတာ ပြျောလိုကျတာကှာ…
အဖိုးရဲ့ အပွုံး အပြျောလေးတှေ နဲ့ တကျကွှတဲ့ အိမျပွနျခွလှေမျးတှကေတော့…ကနြျော ကွညျ့ပွီ အတေျာ့ကို ပြျောရတယျဗြာ ဆငျးရဲနှမျးပါး အဖိုးအဖှားမြားအတှကျ အတူအကှ ပူးပေါငျး ကူညီလှူဒါနျးလိုပါက ကိုပူတူးနှငျ့ဘျောဒါမြား ဖုနျး 09-5408437 သို့ဆကျသှယျလှူဒါနျးနိုငျပါတယျရှငျ…
ကားနဲ့ ဖြတ်သွားရင်း…ဖြတ်ခနဲ တွေ့လိုက်ရတာ…ကိုယ်တွေ့ချင်လို့ ရှာနေတဲ့ အဖိုး… အဖိုးရေ…လာပါအုံး…ဟေ…လာပြီ ကွ…ဘာယူမလဲ သား… ဂွေးချို၊ သရက်၊ မရမ်းသီးပါ တယ် ကွ…ဟုတ် အဖိုး…ဘယ်လိုရောင်းတုန်း?? တချောင်း 200 Ks ပဲ သား… ဟုတ် ဘယ်နှချောင်းရှိလဲ အဖိုး ?? အများကြီးပဲလေ…သား ဘယ်နှချောင်းယူမလဲ…ဘာယူမလဲ ??
သား အကုန်ယူမယ်။ ဟေ…တကယ်ကြီးလား။ တကယ်ပေါ့…အဖိုးရဲ့ ဒါဆို သားတွက်ကြည့် ပေးပါလား…အဖိုး မတွက်နိုင်တော့ဘူး။ ဟုတ် အဖိုး…သားတွက်ကြည့်မယ်နော် အေး…အေး…အဖိုးရေ…(၈၁)ချောင်း ရှိတယ် ဗျ…အေး…(၈၀)ပဲ ထားကွာ…တချောင်းက ယူမနေတော့ဘူး။ ဟာ…ဒါဆို ကျေးဇူးတင်ပြီဗျာ …‌ရော့ အဖိုး 30,000 Ks…ဟေ…သား မင်းပေးတာက ပိုက်ဆံ အရွက်တွေ များနေတယ်နော်…
ပိုနေတယ်ကွ (5ထောင်တန်တွေ ပေးလိုက်တာမလို့) အဖိုး…ဘယ်လောက် ပြန်အမ်းရမှာတုန်း? မအမ်းရဘူး အဖိုး…ပိုတာ အဖိုးယူလိုက်တော့ ဗျ…ဟာ…ဒါဆို ခု ပြန်ရင် ဆန် နဲ့ ဆီ စားစရာတွေ ဝယ်ပြီ ပြန်မယ်ကွ…ဟုတ် အဖိုး…အဖိုးကြိုက်တာ လုပ်ဗျာ…ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွာ…ဒီနေ့ လျှောက်ပတ်ပြီ မရောင်းရတော့ဘူးပေါ့ ကွာ…အိမ် အစောကြီး ပြန်နားရပြီ…လိုတာတွေလဲ ဝယ်လို့ရပြီ…
ကျေးဇူးတင်တယ်ကွာ…အဖိုး ဇာတာက တသက်လုံး ဒါပဲ ရောင်းစားရတဲ့ ဇာတာပါတယ် ကွာ…ကိုဗစ်မှာ အဖိုး အဲ့ဇာတာ ပြီဆုံးမယ် ထင်ခဲ့တာ…အသက်က ရှင်နေတော့…ဆက်ရောင်းရတာပေါ့ကွာ(အသက် ၇၈နှစ်ရှိပြီတဲ့) ဟာ အဖိုးကလဲ…ပေါက်ကရတွေ ပြောပြီ…အိမ်ဂရုစိုက်ပြန်တော့နော်…အေး…အေး…အိမ်အစောကြီး ပြန်ရတာ ပျော်လိုက်တာကွာ…
အဖိုးရဲ့ အပြုံး အပျော်လေးတွေ နဲ့ တက်ကြွတဲ့ အိမ်ပြန်ခြေလှမ်းတွေကတော့…ကျနော် ကြည့်ပြီ အတော့်ကို ပျော်ရတယ်ဗျာ ဆင်းရဲနွမ်းပါး အဖိုးအဖွားများအတွက် အတူအကွ ပူးပေါင်း ကူညီလှူဒါန်းလိုပါက ကိုပူတူးနှင့်ဘော်ဒါများ ဖုန်း 09-5408437 သို့ဆက်သွယ်လှူဒါန်းနိုင်ပါတယ်ရှင်…
ကြေးဇူးတငျပါတယျ ဒကာလေး…ဆှမျးထမငျး စားမဝငျတော့လို့ပါ အသကျ(၈၀)ကြျော ဆရာလေး